“Ma arki karo Barcelona la’aanta Lionel Messi” – Gool FM
(Barcelona) 23 Sebt 2020. Xiddiga reer Argentine, Lionel Messi, ayaa u dhawaa inuu ka tago safka Barcelona xagaagan, kaddib markii uu si rasmi ah uga codsaday maamulka kooxda inay u ogolaadaan inuu kaga tago naadiga lacag la’aan.
Ciyaaryahanka kooxda Barcelona ee Sergi Roberto ayaa sheegay inuusan malayn karin Barca, la’aanta xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi, taasoo muujineysa inuusan rumeysneyn wararka sheegayay inuu ka tagayo suuqa xagaaga.
Si kastaba ha noqotee, maamulka Barcelona ayaa diiday codsigii Lionel Messi ee ahaa inay u ogolaadaan inuu si bilaash ah ku baxo kaddib markii la kansalay qodobka u ogolaanayay in la kansalo qandaraaskiisa Blaugrana, iyadoo aan wax magdhow ah la siinin.
Lionel Messi ayaa diiday inuu u dhaqaaqo maxkamadaha si uu dacwadiisa ugu xaliyo Barcelona, ​​wuxuuna ogolaaday inuu lasii joogo Barça ilaa dhamaadka qandaraaskiisa xagaaga soo aadan 2021, xilligaasna wuxuu go’aansan doonaa inuu katago ama uu lasii joogo kooxda reer Catalonia.
Sida laga soo xigtay idaacada “RAC 1” ee dalka Spain Sergi Roberto ayaa yiri:
“Sida qof walba oo Catalons ah, waxaan u maleeyay inaysan run noqon karin in Messi uusan nala sii joogi doonin”.
“Ma qiyaasi karo Barcelona la’aanta Lionel Messi, hadana waxaan u arkaa inuu sifiican u tababaranayo”.
“Waa ciyaaryahan xirfadle ah, shaki iigama jiro inuu markasta 100% siin doono maaliyadan iyo kooxda”.